ဟန်ဆောင်ကောင်းလွန်းတဲ့ ကျော်ကျော်တို့ ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့နောက်ကွယ်က အရှုပ်တော်ပုံတွေအားလုံးကို ဖွင့်ချလိုက်တဲ့ သင်္ဇာမြင့်မိုရ် – Cele Lover
ခပ်မိုက်မိုက်ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာကတော့ သဇ်ာမြင့်မိုရ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ ပရိသတ်အားပေးမှုတွေနဲ့အောင်မြင်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အလှပုံရိပ်လေးတွေကိုအမြဲရိုက်ကူးပြီးလူမှုကွန်ရက်မှာတင်ပေးလေ့ရှိတာပါ။
လူမှုကွန်ရက်မှာပုံရိပ်လေးတွေအမြဲတင်ပေးလေ့ရှိပြီး ပရိသတ်တွေနဲ့အမြဲမပြတ်ရှိနေသူပါ။ အခုမှာတော့သူမရဲ့တင်ထားတဲ့စာလေးတစ်ခုကြောင့် ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားနေကြတာပါ။ နာမည်ကြီးမင်းသားတစ်ယောက်ကိုခုလိုပဲအချက်လက်တိကျစွာပြောဆိုလိုက်တာပါ။
မင်းသားတစ်လက် မြင်စေရန်.. ဒါမျိုးတွေ မရေးချင် မပြောချင်သော်လည်း.. ယောက်ျားတန်မယ့် စောင်းချိတ်ပြောဆို ရေးသားတတ်သော .. စောင်တင်းပြောတဲ့နေရာ နာမည်ကြီးသူ ကိုယ်တွဲနေတဲ့ မင်းသမီးချစ်သူလေးက.. မိန်းမကောင်းလေးမို့ .သူများသားသမီးတွေကို လာထိပါးနေတာလားဟင်?မသိလို့ပါ..ကျွန်မက.. ရည်းစားတစ်ယောက်နဲ့ပြတ်လို့တစ်ယောက်တွဲတာ..(သူများရည်းစား/ သူများယောက်ျား/မိန်းမ) နဲ့.. တွဲနေကြတာလည်း မဟုတ် .. အစ်ကို့စော်လေးလို.. အစ်ကိုရှိလျက်နဲ့သူများ ပေးစာ ကမ်းစာယူနေတာမျိုးအစ်ကိုကိုယ်တိုင် ထိုးကျွေးတာမျိုးEx နဲ့ Date တာမျိုးလက်ရှိနေထိုင်သောနေရာနဲ့ အစ်ကိုလိုက်မောင်းနေတဲ့ကားလေးက..ဘယ်က ရ ထားလဲ? သိလျက်နဲ့ အစ်ကိုရယ်.. အဲဒါကမှ အစ်ကို့နေရာ ဘာလဲ?
ညီမက.. မပတ်သတ်ချင်လို့တောင်Unfriend လုပ်လိုက်ပြီး မကြည့်ပဲနေတာလေ.. ဘာအကြောင်းမှ စိတ်မဝင်စားလို့ ခုလို ရက်နည်းနည်းကြာမှသူများပြမှ သိရတော့.. အခုလို အောက်ဖဲလှန်တာတောင်နောက်ကျသွားလားမသိဘူး..အစ်ကိုအသိဆုံးပါနော်..သင်္ဇာမြင့်မိုရ်ဆိုတာ.. ​ဘယ်သူ့ ပေးကမ်းစာနဲ့မှ အသက်ဆက်နေတာမဟုတ်ဘူး.. ကိုယ့်စည်း ကိုယ့်ကမ်းနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ နေလာတဲ့မိန်းမပါ.. မထိခလုတ် ထိခလုတ်နဲ့ -ျင် ထထမယားပါနဲ့..တန်ရာ တန်ရာ တုံ့ပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့်.. အေးချမ်းပါစေနော်..ဪ.. မသိပဲ.. ကိုယ် မှားမှားမှန်မှန် ဘာညာ လာရေးနေသေးတယ်စုံစမ်းပါဦး အဲ့လင်မယားအကြောင်းလည်း.. ဘယ်အခမ်းအနားတွေခိုးတက်ပြီး ဘယ်နှစ်ကြိမ် မ ပြီးပြီလဲ ဆွာအိပ်ကြပါတော့ဗျာ.. မနက်အလုပ်ပိတ်လည်း.. အိပ်ရေးဝဝအိပ်ကြပါ.. ဆိုပြီးပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Previous Article လွန်ခဲ့တဲ့ (၂)နှစ်ခန့်က ခင်ပွန်းနဲ့အတူ ရိုက်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုကြောင့် ဝေဖန်ခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကို စိတ်မကောင်းစွာဖြင့် ရင်ဖွင့်လာတဲ့ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း
Next Article ဖေဖေနဲ့ သာယာကြည်နူးနေတာကို ဗီဒီယိုခိုးရိုက်နေတဲ့ မေမေ့ရဲ့မျက်နှာကိုသေချာကြည့်ပြီး ရန်တွေ့နေတဲ့ Treasure လေးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်